Android application များ - သုံးသပ်ချက်များ၊ ဖြန့်ချိမှုအသစ်များ၊ အခမဲ့နှင့်ပိုမိုသောအရာများ! | Androidsis
Android application များ
Android စမတ်ဖုန်းတစ်ခု ၎င်း၏လျှောက်လွှာများမရှိဘဲဘာမျှဖြစ်လိမ့်မည်။ Application များမှာ Android စမတ်ဖုန်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်ပြီးသင် terminal ထဲမှသင်လိုချင်သောမည်သည့်အလုပ်မဆို - အလုပ်ကိရိယာတစ်ခု၊ ဂိမ်းစင်တာတစ်ခု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစီအစဉ်အစရှိသည်တို့ကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Android အက်ပလီကေးရှင်း - Google Play တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် အရသာအားလုံးအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများ အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ။ အစီအစဉ်များ၊ ဂိမ်းများ၊ ရုံးခန်းသုံးအလိုအလျောက်၊ လူမှုရေးကွန်ယက်များ၊ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့သင်လိုအပ်တာကိုအာရုံစိုက်ပြီးရှာဖွေနိုင်ခြင်းအပြင်မလိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ထိုငါတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏! မင်းကိုကူညီဖို့ ဒီ Android application တွေရဲ့ကမ္ဘာ.
အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ် APK များကို Download လုပ်ပါ
ကျန်းမာရေးအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ဤကဏ္improveတွင်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်အကောင်းဆုံးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များ (သို့) ပုံသဏ္toာန်မည်သို့နေရမည်ကိုသိကောင်းစရာများကိုရှာဖွေပါ။
abs လုပ်ဖို့ applications များ
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် Apps များ
တောင်တက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး app များ
ဤအပိုင်း၌သင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်များအကြောင်းအားလုံးကိုသိရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်၊ ၎င်းတို့ကို Android တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းများနှင့်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများ။
နောက်ဆုံးထုတ် WhatsApp သတင်းနှင့်လှည့်ကွက်
utilities များတွင်သင့်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အကောင်းဆုံး Android application များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ၊ မှတ်စုများယူပါသို့မဟုတ်ဤကဏ္sectionတွင်သင်တွေ့ရှိမည့်အကောင်းဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြင့်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးတက်စေပါ။
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန် application များ
သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန် application များ
စာရွက်စာတမ်းများကို scan လုပ်ရန်အပလီကေးရှင်းများ
ဖိုင်များကို unzip ရန်အကောင်းဆုံးအက်ပ်များ
အကယ်၍ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကို podcasts များအကြောင်းသို့မဟုတ်သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းကို သုံး၍ DJ ဖြစ်လာနိုင်လျှင်သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်သင်၏ဖုန်းကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည်။
Android တွင် DJ တစ်ခုအပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်
Android ရှိ Podcasts များကိုနားထောင်ရန်အပလီကေးရှင်းများ
အကယ်၍ သင်ရှာဖွေနေသည်မှာသင်၏ Android မိုဘိုင်းမှသင်၏ဓါတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန်အပလီကေးရှင်းများဖြစ်ပါကသင်၏ပုံများကိုပြန်လည်ထိတွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းအချို့မှာ -
မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက် application များ
သင်၏ Android ဖုန်းမှသင်လေ့လာနိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုသင်ရှာဖွေနေပါက Google Play တွင်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေးဆော့ဝဲလ်များကိုသင့်အားထားပေးမည်။
သင်၏ဂူဂဲလ်ဂေဟစနစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာများအပါအဝင်၎င်း၏အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိုပါကဤအပိုင်းကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။ အားလုံးနှင့်သတင်းနှင့်လှည့်ကွက်များအထဲတွင်ရရှိနိုင်ပါ။
Android Wear နှင့် Wear OS အတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ
Google Home အတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ
သင်၏ Android စမတ်နာရီအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ
Android TV အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများ
10 ရှိရမည် Android apps များ
Android မှာငါတို့ရရှိနိုင်တဲ့ application အမြောက်အမြားကိုတွေ့တယ်။ ကျန်တာတွေကိုကျော်ပြီးထူးခြားတဲ့ application တွေရှိပေမယ့်အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားယနေ့ Android အတွက်ရရှိနိုင် 10 အကောင်းဆုံး app များဖြစ်ကြသည်။
လမ်းညွှန်လျှောက်လွှာသိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ်နေရာရာသို့ကားမောင်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကလမ်းညွှန်ချက်များသို့မဟုတ်အညွှန်းများအတွက်သာအသုံးပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသွားအလာအခြေအနေကိုမြင်နိုင်ပြီး၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဒေသခံကမ်းလှမ်းမှုများကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။ အလွန်ပြည့်စုံသော app တစ်ခု။
ဆွီဒင်ဂီတ streaming အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android တွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းရှိကြီးမားသောတေးဂီတကတ်တလောက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာတွင်ရှိကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုနားထောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီ application ဟာ Android မှာလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုထံသို့မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်ပြီးအချိန်တိုင်းအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် group chats လည်းရှိသည်။
ဒီဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းသည်ယနေ့ Android အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများအားလုံးကို Cloud တွင်လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားရုံသာမကအမျိုးအစားအားလုံးကိုအမျိုးအစားအလိုက်အလွယ်တကူစုစည်းနိုင်စေသည်။ သူတို့ကိုအခြားကိရိယာများနှင့်လည်းစည်းညှိသည်။
Social network သည် Android တွင်လူကြိုက်အများဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် (၂၄ နာရီအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားသော) သူတို့၏ပုံပြင်များအပြင်၎င်းနှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုတင်ပို့နိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းရှိအကောင့်အမျိုးမျိုး၏အကောင့်များကိုအောက်ပါဖြစ်နိုင်ခြေ၊ ၎င်းတွင် ၀ ယ်ယူခြင်းအပြင်၎င်းကိုအပြည့်စုံဆုံးအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Android တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်းသိထားသည့်အခြားလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်တယ်၊ ကမ္ဘာ့သတင်းတွေနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်တွေနောက်ကလိုက်နေတယ်။
၎င်းဖုန်းသည် Android ဖုန်းတိုင်းတွင်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အီးမေးလ်အကောင့်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အီးမေးလ်များစီစဉ်ခြင်းကဲ့သို့အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Nova Launcher ကို
သင်၏ Android ဖုန်းအသွင်အပြင်ကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်အသွင်ပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် operating system ကိုလူအများစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုခွင့်ရစေသည့်အမှောင်စနစ်ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်ရွေးချယ်စရာများဖြင့်ဖြစ်သည်။
Google က Chrome ကို
Android တွင် browser တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်း Google Chrome သည်ဖုန်းများပေါ်တွင်သာအဆင်သင့်တပ်ဆင်ထားပြီးအပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ဆောင်ချက်များစွာပေးသည်၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည် desktop အကောင့်နှင့် Google အကောင့်မှတဆင့်ထပ်တူပြုရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။
Android အတွက်နေရာတစ်ခုရရှိထားသည့်နောက်ထပ် messaging application တစ်ခု။ ၎င်းသည်၎င်း၏ရိုးရှင်းသော interface အတွက်ထူးခြားသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အားမတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအထူးသဖြင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုနယ်ပယ်တွင်လျှို့ဝှက်ချက်တင်များသို့မဟုတ်၎င်းတို့အားခဏအကြာတွင်အလိုအလျောက်ဖျက်ဆီးနိုင်သည့်အလားအလာများပေးသည်။
နောက်ထပ် Android Apps များ
ဤအပိုင်းတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောအမျိုးမျိုးသော application များကိုရယူနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဖြစ်အားလုံးနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ Android အက်ပလီကေးရှင်းများမှအများဆုံးရရှိရန်သင်ခန်းစာများနှင့်လှည့်ကွက်များ.
မှိုများကိုခွဲခြားရန်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ ၈ ခု
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ပေါင်း .
သင်စားသုံးနိုင်သောအစားအစာများကိုဖော်ထုတ်ရန်အခက်တွေ့နေသောမှိုအမဲလိုက်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလား။ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှုများစွာရှိပါသည်။
Running Apps ၁၀ ခု
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပေါင်း .
Reface, မယုံနိုင်လောက်အောင်နက်ရှိုင်းသောဖန်တီးမှုများကိုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံး application ကို
အကယ်၍ သင်နည်းပညာအကြောင်းပုံမှန်ဖတ်ပါက၊ နက်ရှိုင်းသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သောအသုံးအနှုန်းဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုသင်ကြားရဖွယ်ရှိသည်။
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
ဗွီဒီယိုချက်တင် (သို့) ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဆက်သွယ်မှုအများဆုံးစွယ်စုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကယ်တင်သည်။
Android တွင် Fintonic အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
အမေဇုံသည်စျေးကွက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဝယ်ယူသောအခါတွင်သိမ်းယူခဲ့သည်။ အသိအကျွမ်း ...
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
Mark Zuckerberg သည် Instagram ကိုဝယ်ယူပြီးကတည်းကဤလူမှုကွန်ယက်သည် Facebook ပေါ်တွင်သူတို့ရှိခဲ့သည့်အကန့်အသတ်များဖြင့်ကြီးထွားလာခဲ့သည်။
Funimate ကားအဘယ်နည်း။ ၎င်းမှမည်သို့အကောင်းဆုံးရယူရမည်နည်း
ဗီဒီယိုများသည်နေ့၏အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ TikTok, Instagram နှင့်ယခု YouTube Shorts များသည် ...
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
WhatsApp သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အသုံးများဆုံး instant messaging app ဖြစ်သည်။
Stickmen ဟုလည်းလူသိများသော Stickmen သည် Android ဂိမ်းများတွင်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိအကျ ...
အခမဲ့ TV, per-per-view လိုင်းများကို TV ကြည့်ရှုရန်အပလီကေးရှင်းများ!
အခမဲ့ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံး application များ
WhatsApp ကိုစူးစမ်းလေ့လာနည်း (သို့) အကောင့်တခုခုကိုမတူညီသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုမှာထားခြင်း
ရုရှားရှိ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်များအားလုံးကိုမည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း
သင်၏ Android လုံခြုံရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသော App တစ်ခုဖြစ်သည်
Android ကိုသော့ခတ်ရန်နည်းလမ်းသစ်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး စည်းချက်ပေးပါ !!
[APK] PlayMX အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ယခု၎င်းကို MasDeDe ဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
သင်၏ Android Tablet တွင်တရားဝင် WhatsApp application ကိုမည်သို့သွင်းရမည်နည်း
သင်၏ Wifi လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးပြီးမည်သည့်ကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်သည်ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း